❤️ Ahoana no hampitomboana ny mpanaraka ny Instagram amin'ny fomba organika : Instagram Automation News - Winches Club
Ny Instagram dia lasa matanjaka media sosialy ho an'ny orinasa. Noho ny antony mazava : 13% amin'ny mponina eran-tany no mampiasa azy io, ary ny 80% amin'izy ireo dia manaraka orinasa.
Miaraka amin'ny tahan'ny 4,21% de tia, fizarana sy fanehoan-kevitra, Nilaza i Oberlo fa tsy mbola nahery kokoa ny firotsahan'ny mpanjifa. Malaza avo folo heny noho ny Facebook izy io, Pinterest sy Twitter miaraka.
Ary noho izany, Ny orinasam-pandrosoana dia mitady fomba vaovao handraisana ireo mpanaraka ny Instagram, na eo aza ny fahasahiranana. Mba hanampiana anao hahazo tombony betsaka amin'ny hetsika ara-barotra organika sy karamainao raha mitahiry ny tetika ara-barotra Instagram anao mandritra ny fotoana maharitra, nanangona ity lisitra mahasoa misy soso-kevitra 23 ity izahay. Fotoana hanombohana ny fety izao.
1. Fanavaozana tsy tapaka.
Ny marika dia tsy maintsy mavitrika raha te hahazo mpanaraka vaovao sy hampitombo ny firotsahana, fa tokony ho mavitrika manao ahoana izy ireo ? Ny fanadihadiana dia mampiseho fa lahatsoratra iray na roa isan'andro no mety indrindra.
2. Fa tsy mitory, mizara tantara.
Ny dokambarotra ara-barotra Instagram dia tsy miraharaha ny andraikitry ny Instagram amin'ny maha-”fitaovana fitaomam-panahy”, ho an'iza no nanaovana azy. Raha tokony hitory hafatra momba ny varotra amin'ny mpividy anao fotsiny, mampiasa sary, horonan-tsary sy lahatsoratra mba hisarihana azy ireo.
3. Mamorona anarana marika fanta-daza.
Ny orinasa miezaka manatsara ny mombamomba ny Instagram dia tokony hifantoka amin'ny zavatra telo lehibe : mangarahara, miavaka sy tsy miovaova. Ny fomba maimaika sy tsy voaomana dia tsy hitondra vokatra irina.
4. Mitazona aesthetika tsy miovaova manerana ny fahana Instagram anao.
Instagram dia tambajotra sosialy malaza indrindra amin'ny fizarana sary sy horonan-tsary noho ny maha-zava-dehibe azy amin'ny estetika.. Na dia eo aza ny zava-misy fa ny mamirapiratra mamirapiratra tsy lamaody intsony, Ny votoaty hita maso ao amin'ny Instagram dia tsy hanary ny maha-zava-dehibe azy.
5. Manapaha hevitra amin'ny tenifototra mety hampiasaina.
Ny tenifototra ampiasainao ao amin'ny Instagram dia afaka mampiova ny hafatra ambony sy ny lahatsoratra izay miafara amin'ny faran'ny lisitra manaraka anao..
6. Mifantoha amin'ny fitaovana vokarin'ny mpampiasa.
Ny votoaty noforonin'ny mpampiasa Instagram no grail masin'ny marketing. Ny votoaty dia noforonina sy ankatoavin'ny tsena kendrenao alohan'ny handehanana mivantana, izay manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana ara-barotra raha mampitombo ny firotsahana amin'ny mpanjifa.
7. Tadiavo ireo endrika video samihafa hita ao amin'ny Instagram mba hamaritana hoe inona no mety amin'ny marikao.
Mihoatra lavitra noho ny an'ny sary ny sandan'ny lahatsary.
8. Mampiasà fitaovana fanoratana mihidy sy fametahana lahatsoratra mihidy ao amin'ny Instagram.
Araka ny Instagram, 60% ny tantara no henoina, raha 40% kosa no jerena ao anaty fahanginana.
9. Hihodina ao ambadika ny horonana Instagram raha avelanao.
Zava-dehibe ny mahatakatra ireo endrika dokam-barotra maro eo amin'ny lampihazo, satria 75% amin'ny Instagrammers no milaza fa mandray andraikitra izy ireo “anisan'izany ny fitsidihana tranokala, Google na lazao amin'ny namana momba izany” taorian'ny fiantraikan'ny lahatsoratra iray.
10. Ampiasao ny sivana augmented reality ao amin'ny Instagram ho tombontsoanao.
Ny Spark AR Studio an'ny Instagram dia manamora ny famoronana sivana zava-misy mitombo. Miaraka amin'ny fomba fijery an'arivony tapitrisa amin'ny sivana lehibe indrindra ao amin'ny Instagram nanomboka teo, ny augmented reality no tena nahazo vahana teo amin'ny lampihazo.
11. Mampiasà karazana doka video an'ny Instagram.
12. Mety Hahafinaritra ny Gif Animated Raha Tavela.
GIF dia fitaovana tsara ho an'ny ekipa marketing, satria ny fanadihadiana dia manondro fa ny mpanjifa dia mety hijery horonan-tsary maharitra 15 segondra hatramin'ny farany..
13. Ampitomboy ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fototry ny mpampiasa Instagram.
Satria ny Instagram dia mamela rohy tokana azo kitihina ao amin'ny bio anao, afaka manampy hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao izany.
14 Azonao atao “mandresy” ao amin'ny Instagram mampiasa optimization motera fikarohana (Seo).
Instagram sy SEO dia mety tsy ho toy ny mpiara-miasa voajanahary raha vao jerena, fa amin'izao tambajotra mafimafy kokoa izao, tena ilaina ny manana drafitra SEO napetraka ny kaontinao Instagram.
15. Mampiasà micro-influencer hanatsarana ny lazan'ny orinasanao
Amin'ny alàlan'ny marketing influencer Instagram, miha-mitombo hatrany ny mampiasa mpitarika eritreritra ao amin'ny indostria mba hanatratrarana mpihaino midadasika kokoa amin'ny hafatra ara-barotra.
16. Omeo valisoa ho an'izay maka sary Instagram mamorona indrindra.
Ny fifaninanana dia fomba tsara hampitomboana ny fandraisan'anjaran'ny mpanaraka anao Instagram.
17. Ny Instagram dia azo ampiasaina ho fitaovana ara-barotra hampitomboana ny isan'ny olona misoratra anarana amin'ny lisitry ny mailakao.
Raha ny momba ny fananganana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa, mailaka no mijanona ho fitaovam-pifandraisana. Ny fampiasana gadget Instagram dia afaka manampy anao hahazo mpanaraka Instagram bebe kokoa (fampiharana).
18. Ampiasao ny Instagram Stories.
Miaraka amin'ny mpampiasa 500 tapitrisa isan'andro, Niakatra haingana teo amin'ny lazan'ny sehatra ny tantara Instagram. Ny endri-tantara ao amin'ny Instagram dia mahatonga ny sasany hieritreritra fa mety haka ny toeran'ny fahana lehibe.
19. Ampidiro rohy mankany amin'ny tantaranao Instagram ao amin'ny mombamomba anao.
taloha, Ireo mpampiasa Instagram voamarina ihany no afaka manampy ilay rohy ” Jereo bebe kokoa ” amin'ny tantaran'izy ireo, fa izao, izay manana kaonty matihanina sy mpanaraka 10.000 farafahakeliny dia afaka manao izany.
20. Ampiasao tsara ny emoticons.
Emojis, manokana, manolotra tombony amin'ny fifandraisana an-tsoratra rehefa ampiasaina amin'ny Instagram. Amin'ny vanim-potoanan'ny emoticons be dia be (ary mbola ho avy koa), zava-dehibe ny manana drafitra amin'ny fampiasana azy ireo izay maneho ny toetran'ny orinasanao nefa tsy miraharaha loatra.
21. Amporisiho ny kaontinao Instagram amin'ny sehatra media sosialy hafa.
Amporisiho ny fantsona Instagram anao amin'ny olona maro araka izay azo atao. Azonao atao izany, ohatra, ao anatin'izany ny rohy mankany amin'ny pejinao Instagram amin'ny fanavaozana ny sata Facebook.
22. Manerana ny antontan-taratasy, mampiasa antso ho amin'ny asa (Ctas).
Manararaotra ny fampiroboroboana Instagram anao, na dia tena ankasitrahana aza. Ampidiro antso ho amin'ny hetsika mazava ao amin'ny Instagram.
23. Tandremo ny lahatsoratrao Instagram malaza indrindra ary raiso an-tsoratra ny fomba hanatsaranao azy ireo.
Ianaro ny “raikipohy” hampitombo ny isan'ny mpanaraka anao ao amin'ny Instagram ary ampiharo izany amin'ny paikady fampiroboroboanao hahazoana mpanaraka bebe kokoa.
Lahatsoratra teo alohaAhoana ny fandefasana horonan-tsary Instagram amin'ny iPhone-nao : 3 Fomba sy fampiharana
Lahatsoratra manarakaInstagram Automation News